Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - လှုပ်ရှားမှုများ
အခက်အခဲ၏ဒီဂရီ: လွယ်ကူပါတယ် , အလယ်အလတ် မာ , အရမ်းခက်တယ်
(coding လိုအပ်ပါတယ် )
ဒေတာစုဆောင်းခြင်း ( )
ငါရဲ့အကြိုက်တွေ ( )
[ ] ကစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်စမ်းသပ်မှုဆန့်ကျင်ငြင်းခုံများတွင် Kleinsman and Buckley (2015) wrote:
အမှန်အတိုင်းလက်ခံအတွက်ရလဒ်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကိုစီရင် "က Facebook ကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်များကိုအနိမ့်နှင့်ပင်လျှင်ဖြစ်ကြောင်းမှန်ရင်တောင်, ထောကျခံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်ဒီနေရာမှာရှယ်ယာမှာအရေးပါတဲ့နိယာမလည်းမရှိ။ ခိုးယူပမာဏပါဝင်ပတ်သက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနေပါစေခိုးယူတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဗဟုသုတနှင့်သဘောတူညီချက်မပါဘဲအပေါ်စမ်းသပ်ခံရဖို့မပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ထိုသုတေသန၏ဘာပဲသဘောသဘာဝ၏။ "ထိုနည်းတူ
ဤအခနျး-လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် deontology-ဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဆက်စပ်ဤဆင်ခြေ? တှငျဆှေးနှေးနှစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်များအရာ
အခုဆိုရင်, သင်သည်ဤအနေအထားကိုဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်စေချင်ကြောင်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်ဘယ်လို New York Times ကိုများအတွက်သတင်းထောက်ဖို့ကိစ္စငြင်းခုန်မလဲ
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) သုတေသီများဖျက်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းတွိအသုံးပြုသင့်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုစဉ်းစားပါ။ နောက်ခံအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့သူတို့ရဲ့စက္ကူကိုဖတ်ပါ။
တစ်ဦး consequentialist ရှုထောင့်ကနေအတိအကျတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
[ ] လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များကျင့်ဝတ်တခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးမှာတော့ Humphreys (2015) လုံးကိုထိခိုက်ပါတီများ၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲပြုသောအမှုများနှင့်အချို့ထိခိုက်စေပါတယ်နှင့်အခြားသူများကိုကူညီပေးပါဖြစ်ကြောင်းကြားဝင်၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်အောက်ပါမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စမ်းသပ်မှုအဆိုပြုထား။
"တစ်သုတေသီကျူးကျော်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလမ်းအလင်းအိမ်အားမရအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိတွက်ချင်သောအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအစုတခုကဆက်သွယ်မေးမြန်းသည်ကိုပြောပါ။ ဒီသုတေသနအတွက်ဘာသာရပ်များအတွက်ရာဇဝတ်ကောင်နေသောခေါင်းစဉ်: အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှာကြံဖွယ်ရှိသုတေသနအလျှော့ပေးလိုက်လျောမည်ဟုကြောင့်ဖွယ်ရှိ (ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစားချိုးဖောက်) မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုမည့်မဖြစ်လိုရှိ၏ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖွယ်ရှိ (တရားမျှတမှုချိုးဖောက်ခြင်း) အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲသုတေသနများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘွားတော်မူမည် ထိုသို့ထိရောက်သောလျှင်သုတေသန-အထူးသဖြင့်အတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (စေတနာအကဲဖြတ်များအတွက်အခက်အခဲထုတ်လုပ်) ကတန်ဖိုးထားမည်မဟုတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားကွဲလွဲစရာဖြစ်ရကြလိမ့်မည် ... ဤနေရာတွင်အထူးကိစ္စများသို့သော်ရုံဘာသာရပ်များန်းကျင်မရှိကြပေ။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာရာဇဝတ်ကောင်ရာဌာန၌မီးခွက်ချပြီးသည့်အဖွဲ့အစည်းများဆန့်ကျင်တုံ့အဘို့အလိုလျှင်, ထို Non-ဘာသာရပ်များမှရယူအန္တရာယ်များလည်းရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည်ဤအန္တရာယ်များကိုအလွန်သတိထားဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကမှားယှငျးစှာထုတ်ဝေရန်အစိတ်အပိုင်းအတွက်လှုံ့ဆော်သူတို့ကိုယ်သူတို့နေသောချမ်းသာကြွယ်ဝတက္ကသိုလ်များမှသုတေသီများရဲ့နေမကောင်း-တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမျှော်မှန်းချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားထားနေသောကြောင့်သူတို့ကိုငါဆောင်၏ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်။ "
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဖြစ်စမ်းသပ်မှုသင့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းအီးမေးလ်တစောင်ရေးဖို့? သငျသညျအဆိုပြုထားအဖြစ်သူတို့ကိုစမ်းသပ်မှုပြုပါကကူညီနိုင်မလား? အဘယ်အရာကိုအချက်များသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် impact စျနိုငျသလဲ
[ ] 1970 60 ယောက်ျားခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (သုတေသီတက္ကသိုလ်အမည်ကိုပါဘူး) ၏အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်တက္ကသိုလ်မှာယောက်ျားရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရာအရပျကို ယူ. လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့ (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) ။ အဆိုပါသုတေသီများကလူရာဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေရာချိုးဖောက်မှုများတုံ့ပြန်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြ Sommer (1969) အဖြစ်သတ်မှတ် "ကျူးကျော်သူတွေကမလာစေခြင်းငှါအရာသို့လူတစ်ဦး၏ခန္ဓာကိုယ်ပတျဝနျးကငျြမမြင်ရတဲ့နယ်နိမိတ်နှင့်အတူဧရိယာ။ " နောက်ထပ်အထူးသ, သုတေသီဘယ်လိုလေ့လာဖို့ရွေးချယ် လူသားရဲ့ဆီးသွားခြင်းအနီးအနားမှာတခြားသူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးသက်သက်သာစူးစမ်းလေ့လာမှုပို့ချပြီးနောက်သုတေသီများလယ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလက်ဝဲ-အများဆုံးသုံးဆီးရေချိုးခန်းထဲမှာဆီးပါ (သုတေသီများဒီပြီးပြီခဲ့အတိအကျဘယ်လိုရှင်းပြကြဘူး) ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ထို့နောက်သင်တန်းသားများကိုလူ့အကွာအဝေးသုံးခုအဆင့်ဆင့်၏တဦးတည်းမှတာဝန်ကျတယ်။ အခြို့သောသူတို့သညျအဘို့, တစ်ပွညျကိုအမှီဘေးမှာသူတို့ကိုရန်ဆီးအသုံးပြုသော; အခြို့သောသူတို့သညျအဘို့, တစ်ပွညျကိုအမှီသူတို့ထံမှတစ်ဦးဆီးတဦးတည်းအာကာသအသုံးပြုသော; တချို့ယောက်ျားအဘို့မရှိ, ပွညျကိုအမှီရေချိုးခန်းဝင်ကြ၏။ အဆိုပါသုတေသီများပါဝင်သူရဲ့ဆီးကပ်လျက်အိမ်သာတင်းကုပ်အတွင်းသုတေသနလက်ထောက် stationing အားဖြင့်ဇွဲ-သူတို့ရဲ့ရလဒ် variable တွေကို-နှောင့်နှေးအချိန်နှင့်တိုင်းတာ။ ဤတွင်သုတေသီများတိုင်းတာခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖော်ပြထားပုံကိုဖွင့်:
"တစ်ခုကလေ့လာသူအဆိုပါဘာသာရပ်များ '' ဆီးဖို့ချက်ချင်းကပ်လျက်အိမ်သာတင်းကုပ်ထဲမှာတပ်စွဲခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အာရုံတွေကို [ဆီးသွားခြင်း] ၏စတင်များနှင့်ချုပ်ရာအချက်ပြဖို့အသုံးပြုမရနိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်ထိုအလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း ... အစား, အမြင်အာရုံတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာသူအိမ်သာတင်းကုပ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းစာအုပ်တွေတစ် stack ထဲမှာ imbedded တစ် periscopic Prism ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြမ်းပြင်များနှင့်အိမ်သာတင်းကုပ်၏နံရံအကြား 11 လက်မအရွယ် (28 စင်တီမီတာ) အာကာသအသုံးပြုသူရဲ့အောက်ပိုင်းကိုယ်ထည်၏, ထို periscope မှတဆင့်တစ်ဦးအမြင်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဆီး၏စီး၏ဖြစ်နိုင်သောတိုက်ရိုက်အမြင်အာရုံတွေ့နေရသည်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ အဆိုပါလေ့လာသူသို့သော်တစ်ဦးဘာသာရပ်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အဆိုပါလေ့လာသူတစ်ဦးဘာသာရပ်ဆီးဖို့အရှိန်မြှင့်လာသောအခါဆီးသွားခြင်းကိုစတင်သောအခါဦးတည်းရပ်တန့်ခြင်း, ဆီးသွားခြင်းရပ်စဲခံခဲ့ရသည့်အခါအခြားရပ်တန့်နှစ်ခုရပ်နားနာရီစတင်ခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါသုတေသီများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးစတင်ခြင်း၏တိုးမြှင့်နှောင့်နှေးစေပါတယ်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ဇွဲ (ပုံ 6.7) လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကနေရလာဒ်: 6.7 ပုံ Middlemist, Knowles, and Matter (1976) ။ အနီးကပ်အကွာအဝေး (ကပွညျကိုအမှီအဆိုပါချက်ချင်းကပ်လျက်ဆီးထဲတွင်နေရာခံခဲ့ရ), အလယ်အလတ်အကွာအဝေး (ကပွညျကိုအမှီထားကြလေ၏တဦးတည်းဆီးကိုဖယ်ရှား), သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု (မျှပွညျကိုအမှီ): ရေချိုးခန်းသို့ ဝင်. အဘယ်သူသည်အမျိုးသားများအတွက်သုံးအခြေအနေများတတာဝန်ကျတယ်။ အိမ်သာတင်းကုပ်ထဲမှာတပ်စွဲလေ့လာသူဆီးသွားခြင်း၏နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဇွဲစောငျ့ရှောကျနှင့်အချိန်တစ်ထုံးစံ-built periscope ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းချက်န်းကျင်စံအမှားများကိုရရှိနိုင်မရှိကြပေ။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Middlemist, Knowles, and Matter (1976) , ပုံ 1 ။
[ , ] မူလတန်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီသြဂုတ်လ 2006 ခန့်ကို 10 ရက်အတွင်းခုနှစ်, မစ်ရှီဂန်တွင်နေထိုင်သော 20,000 လူတွေကိုသူတို့ရဲ့မဲပေးအပြုအမူနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းများ၏မဲပေးအပြုအမူ (ပုံ 6.8) ပြသတဲ့မေးလ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ (ဤအခနျးတှငျဆှေးနှေးထားသကဲ့သို့, United States မှာ, ပြည်နယ်အစိုးရများတစ်ခုချင်းစီရွေးကောက်ပွဲတွင်ဆန္ဒမဲပေးရသူမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဤအချက်အလက်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်။ ) တစျအပိုင်းအစစာပေးပို့ပုံမှန်အားအကြောင်းကိုတဦးတည်းရာခိုင်နှုန်းအချက်အားဖြင့်မဲပေးသူတိုးမြှင့်, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုမဲပေးသူတိုးလာ 8.1 ရာခိုင်နှုန်းရမှတ်အသုံးပြုပုံအကြီးဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင်းအချက်မှတက်ကိုတှေ့မွငျ (Gerber, Green, and Larimer 2008) ။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှု Hal Malchow အမည်ရှိသောနိုင်ငံရေးစစ်ဆင်ရေးအတွက်စမ်းသပ်မှု (ယူဆရ Malchow ဤအချက်အလက်သည်ကိုယ်တော်တိုင်၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်နိုင်အောင်) ၏ရလဒ်ထုတ်ပြန်ဖို့ဖို့မ Donald အစိမ်းရောင် $ 100,000 ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်အောင်ကြီးမားခဲ့တဲ့ (Issenberg 2012, p 304) ။ ဒါပေမယ့်အလန် Gerber, Donald အစိမ်းရောင်နှင့်ခရစ္စတိုဖာ Larimer အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် 2008 ခုနှစ်တွင်စက္ကူထုတ်ဝေခဲ့တယျ။
သငျသညျဂရုတစိုက်ပုံ 6.8 အတွက် mailer စစ်ဆေးခြင်းတဲ့အခါမှာသင်သုတေသီများ '' အမည်များပေါ်မှာပေါ်လာမသတိထားမိပေမည်။ ယင်းအစားပြန်လိပ်စာလက်တွေ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ စက္ကူဖို့အသိအမှတ်ပြုမှာစာရေးသူကိုရှင်းပြ: "အထူးကျေးဇူးတင်စကားဒီဇိုင်းဒီမှာလေ့လာမေးလ်အစီအစဉ်ကိုအုပ်ချုပ်သောသူသည်လက်တွေ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ၏, Mark Grebner, သွားပါ။ "
မာကု Grebner ပြီးသားဤအချိန်တွင်အလားတူစာပေးပို့ထွက်ပေးပို့ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်လျှင်အထက်ပါမေးခွန်းများသည်သင်၏အဖြေကို impact မလား? ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်ဘယ်လိုသုတေသီများယောဂီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတည်ဆဲကြားဝင်အကဲဖြတ်စဉ်းစားသင့်သလဲ
ပုံ 6.8: ကနေအိမ်နီးချင်း mailer Gerber, Green, and Larimer (2008) ။ ဤသည် mailer, 8.1 ရာခိုင်နှုန်းမှတ်အားဖြင့်အစဉ်အဆက် single-အပိုင်းအစ mailer များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအကြီးဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမဲပေးသူနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကနေခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Gerber, Green, and Larimer (2008) , နောကျဆကျတှဲအေ
[ ] ဒီယခင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ်တည်ဆောက်။ ဤအ 20,000 mailers (ပုံ 6.8) ကိုစလှေတျအဖြစ် 60,000 သည်အခြားအလားအလာလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ mailers ခဲ့ပြီးတာနဲ့သင်တန်းသားများအနေဖြင့်တန်ပြန်ရှိ၏။ တကယ်တော့, Issenberg (2012) (စ။ 198) Grebner [လက်တွေ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး] သူ့ရုံးခန်းဖွကွေားစက်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်လူပေါင်းဒါလျင်မြန်စွာသစ်ကိုအကြောင်း, ဖုန်းဖြင့်တိုင်ကြားဖို့ဒုက္ခကိုယူမည်မျှတွက်ချက်ပေးနိုင်ဘယ်တော့မှခဲ့ "ကြောင်းသတင်းပေးပို့ ခေါ်ဆိုမယ့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစွန့်ခွာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ "တကယ်တော့, Grebner သူတို့ကုသမှုတက်ခဲ့သည်ဆို၏ခဲ့လျှင်တန်ပြန်ပင်ပိုကြီးပါပြီနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ငါးရာတထောင်ဒေါ်လာသုံးစွဲခြင်းနှင့်သင်နှင့်ငါသည် Salman Rushdie နှင့်အတူအသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုတပြင်လုံးကိုပြည်နယ်ဖုံးလွှမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အလန်။ " သူကအလန် Gerber, သုတေသီတစ်ဦးမှဆိုပါတယ် (Issenberg 2012, 200)
[ , ] လက်တွေ့တွင်အများဆုံးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံသုတေသီများသင်တန်းသားများကို (ဥပမာ, ဒီအခနျးမှာဖော်ပြထားတဲ့သုံးဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်) မှစစ်မှန်တဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်မှာလေ့လာမှုများအကြောင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံလည်းဟုတ်မှန်သောအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်သောလေ့လာမှုများအဘို့ပေါ်ထွန်းနိုင်ပါ။ သငျသညျသင်တန်းသားများအနေဖြင့်စစ်မှန်သောအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်မယ်လို့ဘယ်မှာမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲသိက္ခာမဲ့လိမ့်မည်ထင်၏။ (အရိပ်အမြွက်: သင်ရုန်းကန်နေကြလျှင်, သင်ဖတ်နေကြိုးစားနိုင် Emanuel, Wendler, and Grady (2000) ။ )
[ , ] သုတေသီများကမကြာခဏအချင်းချင်းရန်နှင့်အထွေထွေအများပြည်သူမိမိတို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖော်ပြရန်ရုန်းကန်။ ထိုသို့ဆက်ဆံရေးအရသာကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်အချိန် re-ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ဂျေဆန် Kauffman, သုတေသနအဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်စီမံကိန်းများ၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်အများပြည်သူမှတ်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Read Zimmer (2010) , ပြီးတော့ဒီအခန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့သောအခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကို အသုံးပြု. Kauffman ရဲ့မှတ်ချက်များကိုပြန်ရေး။
[ ] Banksy ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အကျော်ကြားဆုံးခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရ-oriented လမ်းပေါ်ရေးခွ (ပုံ 6.9) အတွက်လူသိများသည်။ မိမိအတိကျသောဝိသေသလက္ခဏာ, သို့သော်, နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ Banksy ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူချင်တယ်ဆိုရင်သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအများပြည်သူစေနိုင်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူမရှေးခယျြခဲ့သညျ။ 2008 ခုနှစ်တွင် The Daily Mail ကသတင်းစာ Banksy ရဲ့အမည်ရင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဟုဆိုကာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် 2016 ခုနှစ်တွင်, Michelle Hauge, မာကု Stevenson မှ, ဃကင်မ် Rossmo နှင့်စတီဗင် C. သည် Le Comber (2016) ပထဝီကိုတစ် Dirichlet ဖြစ်စဉ်ကိုအရောအနှောမော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. ဤပြောဆိုချက်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပိုများသောအထူးသ, သူတို့ Bristol ကများနှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိ Banksy ရဲ့အများပြည်သူရေးခွ၏ပထဝီတည်နေရာများကိုစုဆောင်း။ ယင်းနောက်ဟောင်းသတင်းစာဆောင်းပါးများနှင့်အများပြည်သူမဲပေးမှတ်တမ်းများမှတဆင့်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်, ထိုသူတို့အမည်ရှိတစ်ဦးချင်းစီသည်, မိမိဇနီး, သူ၏ဘောလုံး (ဆိုလိုသည်မှာ, ဘောလုံး) အသင်း၏အတိတ်လိပ်စာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းရေးသားသူရဲ့သူတို့ရဲ့စက္ကူ၏တွေ့ရှိချက်အနှစ်ချုပ်:
"မကအခြားလေးနက်သော '' သံသယရှိသူ '[လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်အတူက Bristol ကနဲ့လန်ဒန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် geoprofiles ၏ထိပ်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများလိပ်စာများပါဝင်သည်ဟုထက်အခြား, ဒီမှာတင်ဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး Banksy ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. အပြီးသတ်သောထုတ်ပြန်ချက်များကိုအောင်ခက်ခဲသည် [နာမကိုအမှီ redacted] နှင့်အတူ။ "
အောက်ပါ Metcalf and Crawford (2016) ကိုပိုမိုအသေးစိတ်၌ဤအမှုကိုစဉ်းစားတဲ့သူ, ငါသညျဤလေ့လာမှုကိုဆွေးနွေးသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီ၏အမည်ကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာအောက်ပါဝါကျတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စက္ကူ၏စိတ္တဇ၌ဤလေ့လာမှုကိုအပြစ်လွတ်: "ပိုကျယ်ပြန့်, ဤရလာဒ်များအသေးအဖှဲအကြမ်းဖက်ဝါဒ-related လုပ်ရပ်များ (ဥပမာရေးခွ) ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုပြီးလေးနက်မတိုင်မီအကြမ်းဖက်အခြေစိုက်စခန်းတည်နေရာကိုကူညီဖို့အသုံးပြုနိုင်ယခင်အကြံပြုချက်များကိုထောကျပံ့ ဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးပြီး, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာပြဿနာဖို့မော်ဒယ်များ၏လျှောက်လွှာတစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဥပမာပေးပါသည်။ "ဒီစက္ကူသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
က The စာရေးဆရာများသတိထားနှင့်များ၏လေးစားမှုရှိပါတယ် "[နာမကိုအမှီ redacted] နှင့်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ privacy နဲ့အရှင်သာအများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက်ဒေတာကိုသုံးကြပါပြီ: အဆိုပါစာရေးဆရာကသူတို့စာရွက်အဆုံးမှာအောက်ပါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှတ်စုပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့တမင်တကာတိကျသောလိပ်စာများကိုချန်လှပ်ပြီ။ "ဒီစက္ကူသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို? သင် public / private dichotomy ဤကိစ္စတွင်အတွက်သဘာဝကျပါတယ်ထင်ပါသလား?
ပုံ 6.9: Kathryn Yengel /: Kathryn Yengel, 2014. ရင်းမြစ်များက Cheltenham, အင်္ဂလန်အတွက် Banksy နေဖြင့်သူလျှို Booth ၏ပုံ Photograph Flickr ကို ။
[ ] Metcalf (2016) သောအငြင်းအခုံစေသည် "ပုဂ္ဂလိကဒေတာ်လူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်စာရင်းများအတွက်ဘာသာရပ်များမှသုတေသီမှစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအန္တရာယ်များကြားတွင်ရှိပါတယ်။ "
ဒီတူညီတဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ Metcalf ကိုလည်း "မဆိုသတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှုပြီးသားအများပြည်သူ Datasets ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ " ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ဘယ်မှာတွေထဲကဥပမာပေးပါယူဆ anachronistic ကြောင်းဆိုပါတယ်။
[ , ] ဒီအခနျးတှငျရှိသမျှတို့ကိုငါဒေတာအလားအလာသက်သေပြဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဒေတာအလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းလက်မ၏စည်းကမ်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ စားပွဲပေါ်မှာ 6.5 အဘယ်သူမျှမသိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်နေဆဲတိကျတဲ့လူတွေကိုချိတ်ဆက်နိုင်အချက်အလက်များ၏ဥပမာများစာရင်းကိုပေးပါသည်။
ဤဥပမာနှစ်ခု Pick နှင့်နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုအလားတူဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ကိုဖော်ပြရန်။
စိတျအပိုငျးအတွက်ဥပမာနှစ်ခုကို (က) ၏အသီးအသီးအဘို့, ဒေတာ Datasets ရှိလူအကြောင်းကိုအထိခိုက်မခံတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကိုဖော်ပြရန်။
အခုဆိုရင်စားပွဲကနေတတိယ Datasets ကောက်။ အဲဒါကိုလွှတ်မစဉ်းစားတစ်စုံတစ်ဦးကအီးမေးလ်ရေးပါ။ ဒီဒေတာကိုအလားအလာသက်သေပြခြင်းနှင့်အလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသူတို့ကိုရှင်းပြပါ။
စားပွဲတင် 6.5: မဆိုသိသာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖော်ထုတ်ခြင်းပြန်ကြားရေးဖူးမပေမယ့်ဆဲသီးခြားပြည်သူ့ရန်လင့်ခ်လုပ်ထားသောနိုင်ကြောင်းလူမှုရေးမှာ Data များ၏ဥပမာများ
ကနျြးမာရေးအာမခံမှတ်တမ်းများ Sweeney (2002)
ခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေပေးငွေယူဒေတာ Montjoye et al. (2015)
Netflix နဲ့ရုပ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဒေတာ Narayanan and Shmatikov (2008)
ဖုန်းခေါ် meta-data ကို Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
ရှာရန်မှတ်တမ်းဒေတာ Barbaro and Zeller (2006)
ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းကို, လူဦးရေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လူမှုရေးဒေတာ Zimmer (2010)
[ ] လူတိုင်းရဲ့ဖိနပ်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခြင်းသင့်ရဲ့သင်တန်းသားများနှင့်အထွေထွေပြည်သူ့မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ရွယ်တူများပါဝင်သည်။ ဒါဟာဂုဏ်ထူးဂျူးနာတာရှည်ရောဂါဆေးရုံ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် (Katz, Capron, and Glass 1972, chap. 1; Lerner 2004; Arras 2008) ။
ဒေါက်တာ Chester အမ် Southam တစ်ပုံမှန်ဆရာဝန်နှင့်သုတေသီကင်ဆာသုတေသနများအတွက် Sloan-Kettering တက္ကသိုလ်နှင့်ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်မှာဆေးပညာ၏တွဲဘက်ပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 16, 1963 တွင်, Southam နှစ်ယောက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက New York မှာဂျူးနာတာရှည်ရောဂါဆေးရုံတွင် 22 debilitated လူနာများ၏အလောင်းများကိုသို့တိုက်ရိုက်ကင်ဆာဆဲလ်တွေထိုးသွင်း။ ဤရွေ့ကားထိုးကင်ဆာလူနာများ၏ရောဂါပြီးစနစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် Southam ရဲ့သုတေသန၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည်။ အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်၌, Southam ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကြောင့်ပြီးသားအများကြီးပိုရှည်ကင်ဆာသူလူနာယူသော်လည်း, အကြမ်းဖျင်းလေးခြောက်လမှရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းထိုးသွင်းကင်ဆာဆဲလ်များကိုငြင်းပယ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ခဲ့သည်။ Southam သူတို့ကင်ဆာရှိခဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကြသည်နှင့်ပြီးသား debilitated ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်ကင်ဆာလူနာများတွင်နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်ခဲ့သလားဆိုတာကိုအံ့ဩကြ၏။ ဤအဖြစ်နိုင်ချေဖြေရှင်းရန်, Southam သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် debilitated ပေမယ့်သူကကင်ဆာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါခဲ့ကြသည်သူတွေကိုအုပ်စုသို့တိုက်ရိုက်ကင်ဆာဆဲလ်တွေထိုးသွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သုတေသန unproblematic Southam-တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြင့်အာမခံခကျြမြားအပျေါစိတျအပိုငျးတှငျပါဝငျဖို့တောင်းသူသုံးသမား၏နှုတ်ထွက်စာအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်အစပျိုးလေ့လာမှုပြန့်ပွား၏တဲ့အခါမှာစကားလုံး, အချို့နာဇီချွေးတပ်စခန်းစမ်းသပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ် လုပ်. , ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေ-based ။ နောက်ဆုံးတော့ Regents ၏နယူးယောက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ Southam ဆေးပညာလေ့ကျင့်ဖို့ဆက်လက်ပေးနိုင်ရပါမည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်အမှုပြန်လည်သုံးသပ်။ Southam သူအတွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သူ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်စောဒကတက်သူ၏ကာကွယ်ရေးအပေါင်းတို့သည်သူ၏ကိုယ်စားသက်သေထွက်ဆိုသူကိုတော်တော်များများပုံမှန်ကျွမ်းကျင်သူများကထောက်ခံခဲ့ကြရာတောင်းဆိုမှုများ၏နံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ပါတယ် "တာဝန်ရှိသည်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်၏အကောင်းဆုံးအစဉ်အလာ။ ": (1) မိမိသုတေသနပြုခဲ့သည် မြင့်မားသောသိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူမှုရေးအရည်အချင်းကို; (2) သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူမျှမနျဖိုးထားအန္တရာယ်များရှိပါ၏ 600 ကျော်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံ Southam ရဲ့ 10 နှစ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအခြေစိုက်ပြောဆိုချက်ကို; (3) ထုတ်ဖော်များ၏အဆင့်ကိုအဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များက စုပေါင်း. အန္တရာယ်အဆင့်အညီချိန်ညှိထားရမည်, (4) သုတေသနအဲဒီအခြိနျမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထို Regents ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့လိမ်လည်မှု, မုသာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငျြ့ Southam အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်တစ်နှစ်သူ့ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပဲနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Southam ကင်ဆာသုတေသီများ၏အမေရိကန်အသင်းဥက္ကဌရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
ဤအခနျးထဲမှာလေးခုအခြေခံမူကို အသုံးပြု. Southam ရဲ့လေ့လာမှုအကဲဖြတ်ရန်။
ဒါဟာ Southam သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကို ယူ. မှန်ကန်စွာသူတို့ကသူ့အလုပ်တုံ့ပြန်မယ်ဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားပုံ, တကယ်တော့သူတို့ထဲကအတော်များများသည်သူ၏ကိုယ်စားသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်မိမိအသုတေသနအများပြည်သူနှောက်ယှက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုနားလည်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျလူထုအမြင်-ရာပါဝင်သူသို့မဟုတ်များ၏ထင်မြင်ယူဆခြင်းမှကွဲပြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ရှိရွယ်တူ-သငျ့သညျအဘယျသို့အခန်းကဏ္ဍထင်ပါသလဲ လူကြိုက်များအမြင်နှင့်သက်တူရွယ်တူအမြင်ကွာခြားလျှင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲသင့်သလဲ
[ ] အမည်ရစက္ကူခုနှစ်တွင် "အရှေ့ကွန်ဂိုအတွက် Crowdseeding: ရီးရဲလ်အချိန်အတွက်ပဋိပက္ခပွဲများမှာ Data စုဆောင်းဖို့ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း" ဗန် der Windt နှင့် Humphrey (2016) သူတို့အရှေ့ကွန်ဂိုအတွက်ဖန်ဆင်း (အခန်း5ကိုကြည့်ပါ) တစ်ဦးဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်း system ကိုဖော်ပြရန်။ သုတေသီသင်တန်းသားများကိုဖြစ်နိုင်သမျှပျက်ဆီး ပတ်သက်. မသေချာမရေရာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုဖော်ပြပါ။
[ ] အောက်တိုဘာလ 2014 ခုနှစ်တွင်သုံးသည့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များအတွက် 102,780 မှတ်ပုံတင်မဲဆန္ဒရှင်မှ mailers ကိုစလှေတျ Montana-အကြမ်းဖျင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောမဲဆန္ဒရှင်များ၏ 15% ပြည်နယ် (Willis 2014) ပိုမိုသောအချက်အလက်များပေးထားကြသူမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိတိုင်းတာရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းအဖွစျ ။ အဆိုပါ mailers-ထားတဲ့ "2014 Montana အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်များပြန်ကြားရေးလမ်းညွှန်" အမည်တပ်ထားသောခဲ့ကြသည်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ဘားရက်အိုဘားမားနှင့်ပါတီမှမစ်ရွမ်နေသာပါဝင်သည်ထားတဲ့ရှေးရိုးစွဲမှလစ်ဘရယ်နေစကေးပေါ်တွင်တစ်ဦး nonpartisan ရွေးကောက်ပွဲသည်အဘယ်အရာအတွက်, Montana တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ -placed ။ အဆိုပါ mailer လည်း Montana ၏နိုင်ငံတော်၏မဟာအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် (ပုံ 6.10) ၏မျိုးပွားပါဝင်သည်။
အဆိုပါ mailers Montana မဲဆန္ဒရှင်များထံမှတိုင်ကြားစာနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့, သူတို့သည်လင်ဒါမက်ကူလော့, ပြည်နယ်၏ Montana ရဲ့အတွင်းရေးမှူး, အ Montana ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တရားဝင်တိုင်ကြားစေ၏။ သုတေသီ-Dartmouth နှင့် mailer လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့လူတိုင်းစတန်းဖို့ဒ်-ကိုစေလွှတ်စာတစ်စောင်, မည်သည့်အလားအလာရှုပ်ထွေးမှုအတွက်တောင်းပန်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း mailer "ဆိုသည့်နိုင်ငံရေးပါတီ, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူတွဲဖက်မဟုတ်ခဲ့, နှင့်မရည်ရွယ်ခဲ့ရာတွင်အလုပ်ခန့်ကြောင်းအဆိုပါတက္ကသိုလ်များ မည်သည့်လူမျိုးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်။ "အဆိုပါစာကိုလည်းရှင်းလင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်" ဟုအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ "(ပုံ 6.11) ၏တစ်ဦးချင်းစီမှလှူဒါန်းခဲ့ကြသောအကြောင်းကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်တို့အပေါ်မှာမှီခို။
မေလ 2015 ခုနှစ်, Montana ၏နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးအလေ့အကျင့်၏ကော်မရှင်နာယောနသန် Motl, သုတေသီ Montana ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကွောငျးဆုံးဖွတျ: "အဆိုပါကော်မရှင်နာစတန်းဖို့ဒ်, Dartmouth နှင့် / သို့မဟုတ်ယင်း၏သုတေသီများ Montana မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးချိုးဖောက်ကြောင်းပြသရန်လုံလောက်သောအချက်အလက်များရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်သည် လွတ်လပ်သောအသုံးစရိတ်များ၏မှတ်ပုံတင်, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်လိုအပ်လေ့အကျင့်ဥပဒေများ "(ထဲမှာလုံလောကျရှာဖွေခြင်းနံပါတ်3Motl (2015) ) ။ အဆိုပါကော်မရှင်နာလည်းကောင်တီရှေ့နေချုပ် Montana ၏မဟာအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်း Montana ပြည်နယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြောင်းအကြံပြု (Motl 2015) ။
စတန်းဖို့ဒ်နှင့် Dartmouth Motl ရဲ့အာဏာရနှင့်အတူသဘောမတူ။ တစ်ဦးကစတန်းဖို့ဒ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ "စတန်းဖို့ဒ် ... မဆိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်မယုံပါဘူး" နှင့်မေးလ်ကပြောပါတယ် "ဆိုကိုယ်စားလှယ်လောင်း supporting သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်မည်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုမပါဝင်ပါ။ " သူမဟာ mailer အတိအလင်းက "nonpartisan ကြောင်းဖော်ပြထားကြောင်းထောက်ပြ Lisa ကို Lapins အမည်ရှိနှင့် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသို့မဟုတ်ပါတီ "ကိုထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ (Richman 2015) ။
အဘယ်အရာကိုအခွအေနဒီစာပို့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲကြလိမ့်မယ်အောက်, mailers (ခဏ၌ဤအပေါ်ပိုပြီးပေမယ်) မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာထံသို့စလှေတျခဲ့ယူဆ?
တကယ်တော့ခုနှစ်, mailers မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာထံသို့စလှေတျမခံခဲ့ရပါ။ ဂျယ်ရမီဂျွန်ဆင် (ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကူညီသူတစ်ဦးကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များ) ကအစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ mailers "ဝုဏ်မြှောင်ရီပတ်ဘလီကန်အတွက်မျှတသောဖို့ရှေးရိုးစွဲအဖြစ်ဖော်ထုတ်ဝုဏ်နှင့် 39.515 မဲဆန္ဒရှင်မြှောင်ဒီမိုကရက်တစ်အတွက်မြှောင်မျှတသောဖွယ်ရှိလစ်ဘရယ်အဖြစ်ဖော်ထုတ် 64.265 မဲဆန္ဒရှင်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများသူတို့ဒီမိုကရက်တစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေအကြားသိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်မဲပေးသူမျှော်လင့်ကြောင်းမြေပြင်ပေါ်တွင်ဒီမိုကရက်တစ်နှင့်ရီပတ်ဘလစ်ကန်နံပါတ်များအကြားကွာဟမှုအပြစ်နှင့်လွတ်။ "ဒီသုတေသနဒီဇိုင်းကိုသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတုန့်ပြန်မှာသုတေသီများ "မတရားစီရင်ရေးပြိုင်ပွဲနီးကပ်စွာမူလတန်းအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သောကွောငျ့သူတို့စိတျအပိုငျး၌ဤရွေးကောက်ပွဲကိုကောက်ယူသူကပြောပါတယ်။ ယခင် Montana တရားစီရင်ရေးရွေးကောက်ပွဲများ၏အခြေအနေတွင် 2014 မူလတန်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီး, သုတေသီဒီဇိုင်းအဖြစ်သုတေသနပြုလေ့လာမှု "ဖြစ်စေပြိုင်ပွဲများ၏ရလဒ်ကိုမပြောင်းမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ် (Motl 2015) ။ ဒီသုတေသနကသင်၏အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
တကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲ (စားပွဲ 6.6) အထူးသဖြင့်အနီးကပ်မဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဒီသုတေသနကသင်၏အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
ဒါဟာလေ့လာမှုသုတေသီများ၏တဦးတည်းအားဖြင့် Dartmouth IRB တင်သွင်းခဲ့ကွောငျးထွက်လှည့်, ဒါပေမယ့်အသေးစိတ်အမှန်တကယ် Montana လေ့လာမှုမြားထံမှသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ Montana တွင်အသုံးပြုအဆိုပါ mailer အဆိုပါ IRB တင်သွင်းဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုစတန်းဖို့ဒ် IRB တင်သွင်းဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ဒီသုတေသနကသင်၏အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
ဒါဟာအစသုတေသီများ New Hampshire အတွက် 143.000 ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိမဲဆန္ဒရှင်များနှင့် 66,000 အလားတူရွေးကောက်ပွဲပစ္စည်းများလှေတျတျောမူကွောငျးကိုထွက်လှည့်။ အဖြစ်ဝေးငါသိအဖြစ်ဤခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 200,000 အပိုဆောင်း mailers ခြင်းဖြင့်အစပျိုးမျှတရားဝင်တိုင်တန်းရှိခဲ့သည်။ ဒီသုတေသနကသင်၏အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
အဘယ်အရာကို, သင်ကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါလျှင်ဘာမှလျှင်, သင်ကွဲပြားခြားနားပွုပါပွီမလဲ သငျသညျအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် nonpartisan လူမျိုးအတွက်မဲပေးသူတိုးပွါးခြင်းရှိမရှိစူးစမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါလျှင်သင်မည်သို့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြမလဲ?
စားပွဲတင် 6.6: 2014 Montana တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲကနေရလာဒ် (Source: ပြည်နယ်၏ Montana အတွင်းရေးမှူး၏ Webpage)
တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ် # 1
ဒဗလျူဒါဝိဒ်သည်ဟားဘတ် 65.404 21,59%
ဂျင်မ်ဆန် 236.963 78,22%
တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ် # 2
လောရင့် VanDyke 134.904 40,80%
သူ Mike ဂျုံ 195.303 59,06%
6,10 ပုံ: Mailer နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးသောသူမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိတိုင်းတာရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် Montana အတွက် 102.780 မှတ်ပုံတင်မဲဆန္ဒရှင်မှသုံးသည့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်နမူနာအရွယ်အစားပြည်နယ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမဲဆန္ဒရှင်များ၏အကြမ်းအားဖြင့် 15% ရှိခဲ့သည် (Willis 2014) ။ ကနေပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Motl (2015) ။
ပုံ 6,11: ကိန်းဂဏန်း 6,10 မှာပြထားတဲ့ mailer လက်ခံရရှိခဲ့သူ Montana အတွက် 102.780 မှတ်ပုံတင်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုစလှေတျခဲ့ကွောငျးတောင်းပန်စာတစ်စောင်။ အဆိုပါစာ Dartmouth နှင့်စတန်းဖို့ဒ်၏ဥက်ကဋ်ဌ, အ mailer စေလွှတ်တော်မူသောသုတေသီများအလုပ်သောတက္ကသိုလ်များကစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကနေပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Motl (2015) ။
[ ] လူသိရှင်ကြားမေလ 8, 2016, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ site ကို OkCupid ကနေနှစ်ခုသုတေသီများ-Emil Kirkegaard နှင့် Julius Bjerrekaer-ခြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအမည်, အသက်, ကျား, မ, တည်နေရာ, ဘာသာတရားကို-related ထင်မြင်ချက်များအဖြစ် variable တွေကိုအပါအဝင်အကြောင်းကို 70,000 သုံးစွဲသူများ၏ Datasets ဖြန့်ချိ , နက္ခတ်ဗေဒင်-related ထင်မြင်ချက်များ, ချိန်းတွေ့အကျိုးစီးပွား, ဓါတ်ပုံများ, စတာတွေအရေအတွက်အဖြစ် site ပေါ်တွင်ထိပ် 2,600 မေးခွန်းများပေးထားအဖြေတွေကို။ အဆိုပါဖြန့်ချိ data တွေကိုပူးတွဲမူကြမ်းစက္ကူမှာစာရေးဆရာတချို့ကဒီဒေတာကိုစုဆောင်းနှင့်ဖြန့်ချိ၏ကျင့်ဝတ်ကန့်ကွက်ဖြစ်နိုင်သည် "ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် Datasets တှငျတှေ့ data အားလုံးကိုများမှာသို့မဟုတ်ပြီးသားလူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်, ဒါမျှသာဒီ Datasets လွှတ်ပိုမိုအသုံးဝင်သော form မှာကတင်ပြသွားပါသည်။ "
ဒေတာလွှတ်ပေးရန်တုံ့ပြန်မှာစာရေးဆရာတဦး Twitter ပေါ်တွင်မေးမွနျးခဲ့သညျ: "ဒီ Datasets အလွန်အမင်း re-သက်သေပြဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှ username များပါဝင်သည်? ဒါဟာဖျောက်ပေးသည်ပြုသည်မှာမဆိုအလုပ်ခဲ့သလားအမှတ် "သူ့တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်" ဒေတာများကိုပြီးသားအများပြည်သူဖြစ်ပါတယ် "။ (Zimmer 2016; Resnick 2016) ။
[ ] 2010 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ကြည်းတပ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးဆန်းစစ်လေ့လာသူအဖွဲ့အစည်းဝီကီလိခ်မှ 250,000 လျှို့ဝှက်သံတမန်ကေဘယ်လ်ကြိုး ပေး. , သူတို့နောက်ပိုင်းတွင်အွန်လိုင်း posted ခဲ့ကြသည်။ Gill and Spirling (2015) , ပြီးတော့ကစာရင်းအင်းပေါက်ကြားစာရွက်စာတမ်းများ၏နမူနာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ "ဟုဝီကီလိခ်ထုတ်ဖော်အလားအလာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအတွက်သိမ်မွေ့သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့ပုတ်ခံရအံ့သောငှါအချက်အလက်များ၏တစ်ရည်ဝအောင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်" အဲဒီငြင်းခုန်။ ဥပမာ, စာရေးဆရာများသူတို့ကအချိန်ကာလအတွင်းအားလုံးသံတမန်ကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး 5% ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းခန့်မှန်းသို့သော်ဤအချိုးအစား (သူတို့ရဲ့စက္ကူပုံ 1 ကိုကြည့်ပါ) သံရုံးကနေသံရုံးမှကွဲပြားသော။
စက္ကူ Read, ပြီးတော့သူကဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲရေးပါ။
စာရေးသူဟာပေါက်ကြားစာရွက်စာတမ်းများမဆိုများ၏ content ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပါဘူး။ သငျသညျလုပ်ဆောင်သွားရန်မယ်လို့အဲဒီကြိုးတွေကို အသုံးပြု. မဆိုစီမံကိန်းကိုရှိပါသလား? သငျသညျလုပ်ဆောင်သွားရန်မဟုတ်ဘူးဤကေဘယ်လ်ကြိုးသုံးပြီးမည်သည့်စီမံကိန်းကိုရှိပါသလား?
[ ] ကုမ္ပဏီများမှတိုင်ကြားမှုများတုံ့ပြန်ပုံကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်တစ်သုတေသီနယူးယောက်စီးတီးရှိ 240 High-end စားသောက်ဆိုင်များအတုတိုင်ကြားချက်အက္ခရာများကိုစေလွှတ်။ , ဤတွင်အယောင်ဆောင်ပြီးအက္ခရာမှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကသင်၏စားသောက်ဆိုင်မှာခဲ့မကြာသေးခင်ကအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ "ငါသည်သင့်အားဤစာရေးသားခြင်းဖြစ်၏။ မကွာလွန်ခဲ့တဲ့, ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပ။ ရောဂါလက္ခဏာများအစာစားပြီးနောက်လေးနာရီအကြောင်းကိုပေါ်လာဖို့စတင်တဲ့အခါမှာ ... အဆိုပါညနပေိုငျးငြာခဲ့သည်။ အစာအဆိပ်သင့်: တိုးချဲ့ပျို့, အန်, ဝမ်းလျှောခြင်း, ဝမ်းဗိုက်ကြွက်တက်အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောအရာမှထောက်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးအကြှနျုပျကိုခြီပစ်၏ကျည်များအကြား၌အကြှနျုပျတို့၏ရေချိုးခန်း၏ tiled ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်သန္ဓေသားအနေအထား၌ထခွေကိုကြည့်ကျွန်တော့်ဇနီးလျှော့ချခဲ့သည်ကြောင်းစဉ်းစားငါ့ကိုဒေါသထွက်စေသည်။ ... က သာ. ကောင်း၏စီးပွားရေးဗျူရိုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်အတူမည်သည့်အစီရင်ခံစာများ file ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်ပေမယ့်, ငါသည်သင်တို့ကိုလိုခငျြ [အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏အမည်], သင်တို့ကိုငါအညီကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အတွက်ရှောက်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ "
ဤအခနျးတှငျဖျောပွထားသောအခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဒီလေ့လာမှုအကဲဖြတ်ရန်။ သင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ပေးသည်, သင်လေ့လာမှုလုပျမလဲ
ဤတွင်ဘယ်လိုအက္ခရာတုံ့ပြန်လက်ခံရရှိသူစားသောက်ဆိုင်ဖွင့် (Kifner 2001) ပိုင်ရှင်များ, မန်နေဂျာများနှင့်စားဖိုမှူး [နာမကိုအမှီ redacted] သံသယသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတ်တမ်းများ, ပြန်လည်သုံးသပ် menus တွေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပျက်စီးကြောင်းစားစရာဘို့ပေးပို့ထုတ်လုပ်ဘို့ကွန်ပျူတာများမှတဆင့်ကိုရှာဖွေကြောင့်အချက်အပြုတ်ပရမ်းပတာခဲ့ "နဲ့: ။ ဖြစ်နိုင်သမျှချုံး, တက္ကသိုလ်နှင့်ပါမောက္ခနှစ်ဦးစလုံးယခုငရဲကနေစီးပွားရေးကျောင်းမှလေ့လာမှုခဲ့ညံံ့ဘယ်သို့သောအားဖြင့်အားမာန်အားလုံးအကြောင်းကိုမီးဖိုချောင်လုပ်သားများမေးခွန်းထုတ် "ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်လေ့လာမှုအကဲဖြတ်ရန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလား
အဖြစ်ဝေးငါသိအဖြစ်, ဒီလေ့လာမှုတစ်ခု IRB သို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီပြန်လည်သုံးသပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ သငျသညျလေ့လာမှုအကဲဖြတ်ရန်ဘယ်လိုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုပါသလား အဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်လော
[ ] ယခင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းငါသည်လည်းစားသောက်ဆိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုနှင့်အတူဤလေ့လာမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့သငျသညျချင်ပါတယ်။ ဒီကတခြားလေ့လာမှုမှာတော့ Neumark နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (1996) စားသောက်ဆိုင်ငှားရမ်းအတွက်လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ဖို့အတွက် Philadelphia တွင် 65 စားသောက်ဆိုင်မှာစားပွဲထိုးများနှင့်စားပွဲထိုးအဖြစ်အလုပ်လျှောက်ထားရန်လုပ်ကြံကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုယောက်ျားနှင့်နှစ်ခုအမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းသားကိုစေလွှတ်။ , 54 အင်တာဗျူးများနှင့် 39 အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုမှဦးဆောင်သည့် 130 applications များ။ အဆိုပါလေ့လာမှုက high-စျေးနှုန်းစားသောက်ဆိုင်များတွင်အမျိုးသမီးများ၏ဆန့်ကျင်လိင်ဆက်ဆံမှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောသက်သေအထောက်အထားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်ဤလေ့လာမှုယခင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတှငျဖျောပွထားတထံမှ Ethics ကွဲပြားခြားနားသည်ထင်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လို?
[ , ] 2010 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တချို့ကအချိန်, United States မှာ 6,548 ပါမောက္ခဒီတစ်ခုဆင်တူအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ငါအလားအလာ Ph.D ဘွဲ့ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့ကိုငါရေးသားနေပါတယ် သင့်ရဲ့သုတေသနအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူကျောင်းသား။ အကြှနျုပျ၏အစီအစဉ် Ph.D ဘွဲ့ကိုလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် အစီအစဉ်များသည်ဤလာမယ့်ကျဆုံးခြင်း, ငါထိုအချိန်အတောအတွင်းအတွက်သုတေသနပြုခွင့်အလမ်းများကိုအကြောင်းကိုငါလုပ်နိုင်သလောက်လေ့လာသင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်၏။
သငျသညျအတိုချုပ်သင်၏အလုပ်အကြောင်းပြောဆိုသို့ငါနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါသင် 10 မိနစ်ရှိစေခြင်းငှါငါ့အဘို့မဆိုဖြစ်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရလျှင်ငါအံ့သြခဲ့ပါတယ်, ငါသည်ကျောင်းဝင်းအပေါ်ယနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်, ငါကတိုတောင်းအသိပေးစာသိပေမယ့် သင့်ရဲ့သုတေသနပြု။ သင်နှင့်အတူစည်းဝေးဒီကျောင်းဝင်းခရီးစဉ်အတွင်းကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးဖြစ်သကဲ့သို့, သင်သည်ငါနှင့်အတူဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်များအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မဆိုအချိန်။
ရိုးသားစွာ, ကားလို့စ်လိုပက်ဇ် "
ဤရွေ့ကားအီးမေးလ်များကိုအတု ဖြစ်. , သူတို့ပါမောက္ခ (လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းနှိုင်းယှဉ်ယနေ့) (1) အချိန်-frame ကိုပေါ် မူတည်. အီးမေးလ်တုံ့ပြန်ရန် ပို. ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိတိုင်းတာရန်လယ်စမ်းသပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခဲ့ကြသည်နှင့်လူမျိုးစုအချက်ကွဲပြားခဲ့သည့်ပေးပို့သူ၏ (2) အမည်ဖြင့် နှင့်ကျား, မ (စသည်တို့ကိုကားလို့စ်လိုပက်ဇ်, Meredith Roberts သည်, Raj Singh က) ။ အဆိုပါသုတေသီများတောင်းဆိုမှုများကိုတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အတွက်ဖြည့်ဆည်းကြရသောအခါ, ကော့ကေးဆပ်ယောက်ျားကပိုမကြာခဏအမျိုးသမီးများနှင့်လူနည်းစုများဖြစ်ကြသည်ထက် 25% အကြောင်းကိုဒြေအဖွဲ့ဝင်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအယောင်ဆောင်ပြီးကျောင်းသားများကိုထိုနေ့အစည်းအဝေးများမေတ္တာရပ်ခံသောအခါမူကား, ဤပုံစံများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည် (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) ။
လေ့လာမှုကျော်ခဲ့ပြီးနောက်, သုတေသီများအားလုံးသင်တန်းသားများကိုအောက်ပါ debriefing အီးမေးလ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
"မကြာသေးခင်က, သင်သည်သင်၏ Ph.D ဘွဲ့ကိုဆွေးနွေးရန်သင့်ရဲ့အချိန် 10 မိနစ်တောင်းဆိုနေတာကျောင်းသားတစ်ဦးထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိ ပရိုဂရမ်တစ်ခု (ထိုအီးမေးလ်ကိုခန္ဓာကိုယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံပေါ်) ။ ကသုတေသနလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သည်အီးမေးလ်၏အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင်သင် debrief ယနေ့သင်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနေကြသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုသင်သည်မည်သည့်နှောင့်အယှက်မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူးသင်တို့ရှိသမျှ inconvenienced မှာဖြစ်လျှင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့မြော်လင့်ဤစာသည်သင်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းသင့်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံလောက်သောရှင်းပြချက်ပေးသွားမှာပါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျဤသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်၏အချိန်နှင့်ထပ်မံဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အသငျသညျကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့သညျဤကြီးမားသောပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မျှော်လင့်သိကျွမ်းခြင်းပညာ၏တန်ဖိုးကိုမြင်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
"အမျှမကြာမီကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသန၏ရလဒ်များကိုရရှိနိုင်ပါဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသူတို့ကို post ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမသတ်မှတ် data တွေကိုအစဉ်အဆက်ကဒီလေ့လာမှုကနေသတင်းပို့ပါလိမ့်မည်စိတ်ချပါ, ငါတို့ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းအကြားသာစုစုပေါင်း-မတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာရှိအီးမေးလ်တုန့်ပြန်မှုပုံစံများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာ။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေ ကျေးဇူးပြု. တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်အဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ဟာထုတ်ဝေရန်သုတေသနသို့မဟုတ် data ကိုမဆိုအတွက်သက်သေပြရလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, တစုံတယောက်သောသူသည်တစ်ဦးချင်းစီကိုအီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးချင်းဒြေအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးတစ်ခုတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံသို့မဟုတ်ကျဆင်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်မျိုးစုံကိုအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်အဖြစ်အဓိပ်ပာယျမဟုတျပါဘူး။ ဒေတာအားလုံးကိုပြီးသား-de ဖော်ထုတ်နှင့်သက်သေပြအီးမေးလ်ကိုတုံ့ပြန်မှုပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်ဆက်စပ် server ကိုမှဖျက်ပစ်လိုက်ပါသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဒေတာသက်သေပြခဲ့သည့်အခါအချိန်ကာလအတွင်းကခိုင်ခံ့လုံခြုံတဲ့စကားဝှက်တွေနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပညာရှင်များလူ့ဘာသာရပ်များပါဝင်သောသုတေသနပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသန protocols များကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တွေ '' Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (ထိုကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် Morningside IRB နှင့် Pennsylvania ပြည်နယ် IRB တက္ကသိုလ်) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်အမြဲတမ်းအမှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးသုတေသနဘာသာရပ်အဖြစ်သင့်အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, သင် [redacted] မှာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့် [redacted] မှာနှင့် / သို့မဟုတ် [redacted] မှာ Pennsylvania ပြည်နယ် Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တက္ကသိုလ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် Morningside Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
ဤကိစ္စတွင်အတွက် debriefing များအတွက်အငြင်းပွားမှုများဘာတွေလဲ? ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံဘာတွေလဲ? သင်သုတေသီများဤကိစ္စတွင်အတွက်သင်တန်းသားများကို debriefed ကြသင့်ကြောင်းထင်ပါသလား
အဆိုပါထောက်ပံ့အွန်လိုင်းပစ္စည်းများထဲမှာ, သုတေသီများအမည်ရအပိုင်းရှိတယ် "လူ့ဘာသာရပ်များကာကွယ်ပါ။ " ဒီအပိုင်းကိုဖတ်ပါ။ သငျသညျ add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့ဘာမှရှိပါသလား?
သုတေသီဤစမ်းသပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ သင်တန်းသားများကိုဒီစမ်းသပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ အင်ဒရူး Gelman (2010) အတွက်စမ်းသပ်မှုကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်သူသူတို့ရဲ့အချိန်များအတွက်လျော်ကြေးငွေပြီနိုင်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်။ သဘောတူပါသလား? ဤအခနျးထဲမှာအခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အငြင်းအခုံလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။